China Desmopressin acetate kuti jekiseni fekitari uye vagadziri | JYMed
Hemophilia A: Desmopress mu Acetate jekiseni 4 mcg / ML kunoratidzwa varwere vane hemophilia A ne chinhu VIII coagulant basa yomuropa kupfuura 5%.
Desmopress mu acetate jekiseni Kazhinji kuramba hemostasis pavarwere vane hemophilia A panguva maoparesheni uye postoperatively kana achiita maminitsi 30 asati dzakarongwa zvichiitwa.
Desmopress mu acetate jekiseni kuchaitawo kurega ropa riri hemophilia A varwere Zvikamu kukuvara kwatangwa kana kunotevera Kutemeswa zvakadai hemarthroses, intramuscular hematomas kana mucosal ropa.
Desmopress mu acetate jekiseni hakuratidzwi kuti kurapa hemophilia A ne chinhu VIII coagulant basa yomuropa akaenzana kana asingasviki 5%, kana kuti kurapa hemophilia B, kana mune varwere vane chinhu VIII antibodies.
Mumamwe mamiriro ezvinhu kurapwa, izvozvo varuramiswe kuedza desmopress mune acetate jekiseni pavarwere vane chinhu VIII nhanho pakati 2% kusvika 5%; Zvisinei, varwere ava vanofanira kunyatsoongorora kuongororwa. Disease Von Willebrand raMwari (Type I): Desmopres va mu acetate jekiseni 4 mcg / ML kunoratidzwa nokuda varwere nounyoro kuti zvive nomwero chaiwo of Willebrand nehosha (Type I) pamwe chinhu VIII nhanho kupfuura 5%. Desmopress mu acetate jekiseni Kazhinji kuramba hemostasis pavarwere vane nounyoro kuti zvive nomwero chirwere of Willebrand patinenge maoparesheni uye postoperatively kana achiita maminitsi 30 asati yakarongwa nzira.
Desmopress mu acetate jekiseni kazhinji kurega ropa riri nounyoro kuti zvive nomwero varwere of Willebrand pamwe Zvikamu kukuvara kwatangwa kana kunotevera Kutemeswa zvakadai hemarthroses, intramuscular hematomas kana mucosal ropa.
Avo Von Willebrand nehosha varwere vari muduku zvichida kupindura vaya zvakakomba homozygous chirwere of Willebrand nomwoyo chinhu VIII coagulant basa uye chinhu VIII of
Willebrand chinhu antigen yomuropa asingasviki 1%. Other varwere vanogona kupindura nenzira shanduka fashoni zvichienderana norudzi samolecular urema zvavanazvo. Ropa nguva uye chinhu VIII coagulant basa, ristocetin cofactor basa, uye of Willebrand chinhu antigen inofanira kuongororwa panguva kwokubatsira desmopress mu acetate jekiseni kuitira kuti zvakakwana siyana dziri kubudirira.
Desmopress mu acetate jekiseni hakuratidzwi kuti kurapwa chakakomba chaiwo of Willebrand nehosha (Type I) uye kana paine uchapupu vanokara samolecular muchimiro chinhu VIII antigen.
Chirwere cheshuga Insipidus: Desmopress mu acetate jekiseni 4 mcg / ML kunoratidzwa sezvo antidiuretic yokutsiva kurapa iri basa nechepakati (cranial) chirwere cheshuga insipidus uye nokuda kurapa kwekanguva polyuria uye polydipsia inotevera musoro kunotevera kana kuvhiyiwa ari pituitary nharaunda.
Desmopress mu acetate jekiseni riri basa kuti pakurapa nephrogenic chirwere cheshuga insipidus.
Desmopress mu acetate kuri kuwanikwa ive gadziriro intranasal. Zvisinei, nzira iyi pakukurukura kunogona hausi zvakasiyana-siyana zvinogona kuita nasal insufflation basa kana kukodzera.
Izvi zvinosanganisira murombo intranasal Absorção de Água, nasal kuzara uye blockage, nasal zvinoyerera, atrophy pamusoro nasal mucosa, uye zvikuru atrophic rhinitis. Intranasal wakurukura kungava kukodzera apo pane havachanyatsogoni pamwero chavanoziva. Uyezve, cranial maoparesheni, akadai transsphenoidal hypophysectomy, nokusika zvinhu apo imwe nzira nzira chourongwa runodikanwa vanenge nasal chiputiriso kana kupora kubva kuvhiyiwa.
Desmopress mu acetate jekiseni 4 mcg / ML iri contraindicated mu vanhu anozivikanwa hypersensitivity kuti desmopress mu acetate kana kuti chero zvakamisa hurongwa desmopress mu acetate jekiseni 4 mcg / ML.
Desmopress mu acetate jekiseni iri contraindicated pavarwere vane mwero kune zvakakomba renal vanotaura (sokuva creatinine Clearance pazasi 50ml / Maminitsi).
Desmopress mu acetate jekiseni iri contraindicated mu varwere hyponatremia kana nhoroondo hyponatremia.
Previous: Telipressin acetate nokuti jekiseni
Desmopressin Acetate ekisipota
Desmopressin Acetate Gmp ekisipota
Desmopressin Acetate Gmp nokutengesa
Desmopressin Acetate nokutengesa
Desmopressin Gmp nokutengesa From China